နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Panel ကို, ပါဝါအင်ဗာ, solar Charge Controller ကို, PWM Controller, တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
Ltd. , Zhejiang Longchi နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
ပြုပြင်ထားသော Sine Wave ကိုအင်ဗာ
PWM နေရောင်ခြည် Charge Controller ကို
စင်ကြယ်သော Sine Wave ကိုအင်ဗာ
နေရောင်ခြည်ကို Power System ကို
solar system ကို
အစိမ်းရောင် optoelectronics ထုတ်ကုန်
အနိမ့်ကာဗွန်, environmentalprotection, စွမ်းအင်ချွေတာရေး။
Longchi အချစ် - အာဖရိက
ညဥ့်အချိန်၌, folar အလင်း system ကိုစာဖတ်ခြင်းစာအုပ်တွေသုံးပြီး
Zhejiang Longchi နည်းပညာ Co. , Ltd မှ။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်ခြင်း, အရောင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးန်ဆောင်မှုသစ်ကိုစွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေများစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီတင်းကျပ်ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်မှု, ISO9001 အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အအောင်လက်မှတ်, အဓိကထုတ်ကုန် SGS ၏အရည်အသွေးကြီးကြပ်မှုအစီရင်ခံစာမှတဆင့်အီးလက်မှတ်, ROHS အစီရင်ခံစာလွန်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်ရယူခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါစက်ရုံယွမ် 56667million ၏မှတ်ပုံတင်မြို့တော်အတူ 55935 စတုရန်းမီတာ, 20 စတုရန်းမီတာဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာ၏ဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း။
အဓိကထုတ်ကုန်နေရောင်ခြည်မှာ PV Module တွေ, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မျိုးဆက်စနစ်, ထုတ်ကုန်၏ 80% အာဖရိကဥရောပသို့တင်ပို့နေကြတယ်, မြောက်အမေရိက, သြစတြေးလျဖြစ်ကြသည်။ ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားဖောက်သည်များကချီးကျူးထောပနာအရှေ့အလယ်ပိုင်း, အရှေ့တောင်အာရှ, အမှန်တကယ် "အစိမ်းရောင် photoelectric ထုတ်ကုန်ချွေတာအနိမ့်ကာဗွန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစွမ်းအင်" ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအများအပြားဖြန့်ဖြူးအိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်, ဖောက်သည်ရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းအများစုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့များမှာ "နေရောင်ခြည်" အသကျကိုဖန်တီးရန်လက်၌ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအသစ်အဟောင်းဖောက်သည်လက်နှင့်အတူပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဝန်ဆောင်မှုအစေခံဖို့လိုလိုလားလား။ ဆက်ဖတ်ရန်
ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစင်တာများအတွက်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်အရပ်ကိုဖောက်သည်များ၏ 3,000% ထက် 30 ထက်ပိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်-ပိုပြီးကူညီခြင်းနှင့်စမတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်များသို့လူမှုရေးဒေတာကိုဖွင့်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုတစ်ကြယ်ပွင့်အပူ, photovoltaic, ကြယ်ပွင့်အပူစွမ်းအင်, ကြယ်ပွင့်ဒီဇိုင်း, အရည်ကိုဆားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့်အတုဓာတုကဲ့သို့အစဉ်-ဖြစ်ပေါ်နေသောနည်းပညာများ၏ကွဲပြားအလုပ်သမားထိန်းချုပ်ထားရဲ့နေကနေအလင်း-အလေးချိန်နှင့်နွေးထွေးမှု effulgent ဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
25 နှစ်ပေါင်း (သို့မဟုတ်တော့ဘူး) ။ ဒီအဆင့်တဦးတည်းချမှတ်သူများအနေဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံမှန်အာမခံချက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ကြယ်ပွင့်ပြားအတော်လေးနည်းနည်းပိုရှည်ကြောင်းထက်ကြာရှည်ဦးမည်: အအာမခံချက်များသောအားဖြင့်ပြားသူတို့ရဲ့ rated အာနိသင်လာသောအခါနှစ်ဆယ်ငါးနှစ်၏ eightieth ၏ထိပ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နိုင်အာမခံပါသည်။ NREL နေဖြင့်တစ်ဦးကလေ့လာမှုပြား၏အမြောက်အများနေဆဲ Manu ကွောငျးဖျောပွသ ... + ဆက်ဖတ်ရန်
သင့်ရဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စနစ်၏စကေးအဆုံးအဖြတ်တစ်ခုလွယ်ကူသောဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှင့်အတူစတင်သည်: အဘယ်သို့ငါအရေအတွက်ကကြယ်ပွင့်ပြားလိုအပ်သလဲ? ရှင်းရှင်းသူတို့ရဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဥပဒေကြမ်းဖယ်ရှားပစ်ရန်လုံလောက်သောစွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ဖို့ယေဘုယျအများပြည်သူဆန္ဒအတိုင်း, မူလတန်းခြေလှမ်းစနစ်ကသင့်ရဲ့ယူနစ်စားသုံးမှုဖြည့်ဆည်းရန်လုံလောက်သောအာဏာကိုထုတ်ကိုဖွင့်နိုင်သလဲဆိုတာအရွယ်အစားဆုံးဖြတ် ... + ဆက်ဖတ်ရန်
ဘယ်လိုနေရောင်ခြည် Panel များအလုပ်လုပ်သလား?
ကြယ်ပွင့်ပြားရစ်သရဖူရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုးများနှင့်အစွန်းအရိပ်လက္ခဏာ, နှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်အလားအလာစွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးအဖြစ်မွှမ်းတင်နှင့် powered Orbital စောင့်ရှောက်လွယ်ကူချောမွေ့။ သို့သော်သို့သော်ကြယ်ပွင့်ပြားအလုပ်သလော ရိုးရှင်းစွာအထား, တစ်ဦးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးခင်းကျင်းလျှပ်စစ်ဓါတ်အား၏စီးဆင်းမှုကိုထုတ်လုပ်, အက်တမ်ကနေအခမဲ့အီလက်ထရွန်ခေါက်ရန်, ဖိုတွန်, ဒါမှမဟုတ်နေရောင်ခြည်၏အမှုန်ခွင့်ပြုသဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ... + ဆက်ဖတ်ရန်
ဖက်စ်။: + 008613615725616
ADD ။: NO.20 Guodao မြောက်ပိုင်းလမ်း, Shangqiang စက်မှုဇုန်ဧရိယာ, Daixi မြို့, Wuxing ခရိုင်, Huzhou စီးတီး, Zhejiang ခရိုင်။
မူပိုင်ခွင့်© 2019 Zhejiang Longchi နည်းပညာ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။